Samsung CEO က Galaxy Note9ကို သုံးနေပြီလား?
17 Jul 2018 . 12:30 PM
Samsung ကနေ မကြာခင် လာမယ့် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ Galaxy Note9စမတ်ဖုန်းကို ထုတ်ပြသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Samsung ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ DJ Koh ကနေ တရားဝင်မကြေညာခင်မှာတင် Samsung Galaxy Note9ကို အသုံးပြုနေတဲ့ပုံပါပဲ။
Samsung CEO Using Galaxy Note 9
အခု Samsung CEO DJ Koh ရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုတော့ Samsung ရဲ့ Sam Mobile Website မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Samsung CEO က Galaxy Note 8 နဲ့ ဆင်တူခြင်းသိပ်မရှိတဲ့ဖုန်းတစ်ခုကို အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ S Pen ကိုတွေ့ရပြီးတော့ ဖုန်းအရောင်က ရွှေရောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ဟာ Galaxy Note9စမတ်ဖုန်းမှာ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအနေနဲ့တော့ အများအပြားရှိလာမှာမဟုတ်ပဲ Samsung Galaxy Note 8 ဖုန်းကိုပဲ Dual Aperture Camera အပြင် Galaxy S Pen မှာ ပြောင်းလဲမှုအများအပြားရှိလာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Samsung CEO အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး တရားဝင်မကြေညာခင် ထုတ်သုံးနေတာက ယခင်တုန်းက Apple ၊ OnePlus လိုမျိုး ကုမ္ပဏီ CEO တွေက သူတို့ရဲ့ မထွက်ရှိသေးတဲ့ဖုန်းတွေကို အရင်အသုံးပြုနေတာနဲ့တောင် တူညီတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
Samsung ကနေ မကွာခငျ လာမယျ့ သွဂုတျလ ၉ ရကျနမှေ့ာ Galaxy Note9စမတျဖုနျးကို ထုတျပွသှားတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ Samsung ရဲ့ CEO ဖွဈတဲ့ DJ Koh ကနေ တရားဝငျမကွညောခငျမှာတငျ Samsung Galaxy Note9ကို အသုံးပွုနတေဲ့ပုံပါပဲ။
အခု Samsung CEO DJ Koh ရဲ့ ဓါတျပုံကိုတော့ Samsung ရဲ့ Sam Mobile Website မှာ ထှကျပျေါလာခဲ့တာဖွဈပွီး Samsung CEO က Galaxy Note 8 နဲ့ ဆငျတူခွငျးသိပျမရှိတဲ့ဖုနျးတဈခုကို အသုံးပွုနတောဖွဈပါတယျ။ S Pen ကိုတှရေ့ပွီးတော့ ဖုနျးအရောငျက ရှရေောငျဖွဈနတောဖွဈပါတယျ။
Samsung ဟာ Galaxy Note9စမတျဖုနျးမှာ ကွီးမားတဲ့ပွောငျးလဲမှုတှအေနနေဲ့တော့ အမြားအပွားရှိလာမှာမဟုတျပဲ Samsung Galaxy Note 8 ဖုနျးကိုပဲ Dual Aperture Camera အပွငျ Galaxy S Pen မှာ ပွောငျးလဲမှုအမြားအပွားရှိလာမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ Samsung CEO အနနေဲ့ အခုလိုမြိုး တရားဝငျမကွညောခငျ ထုတျသုံးနတောက ယခငျတုနျးက Apple ၊ OnePlus လိုမြိုး ကုမ်ပဏီ CEO တှကေ သူတို့ရဲ့ မထှကျရှိသေးတဲ့ဖုနျးတှကေို အရငျအသုံးပွုနတောနဲ့တောငျ တူညီတယျလို့ ပွောရမှာပါ။